महिनावारीका बेला बग्ने रगत किन शरीरमा दल्छन् यी युवती? यस्तो छ चकित पार्ने रहस्य ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > महिनावारीका बेला बग्ने रगत किन शरीरमा दल्छन् यी युवती? यस्तो छ चकित पार्ने रहस्य !
लन्डन- २७ वर्षीया लौरा टेक्सिरिया हरेक महिना महिनावारी भएका बेला निस्किने रगत जम्मा गरेर अनुहारमा लगाउँछिन्। त्यसपछि बचेको रगत पानीमा मिसाएर बोटमा हाल्छिन्।‘सिडिङ द मून नाम’को यो प्रथा धेरै पुरानो मान्यतासँग जोडिएको छ, जसमा महिनावारीलाई उर्वरताको प्रतीकको रुपमा लिइन्छ।लौरा भन्छिन्, ‘बोटमा पानी हाल्दा म जप गर्दै भन्छु- मलाई माफ गर्नु, म तपाईलाईं प्रेम गर्छु, म तपाईंको आभारी छु।’
लौरालाई के लाग्छ भने यो प्रथा महिलालाई सशक्त बनाउने प्रथासँग पनि जोडिएको छ।उनी भन्छिन्, ‘समाजमा अझै पनि यो कुरालाई एकदमै लाजको रुपमा लिइन्छ। महिनावारी भएका बेला आफ्नो अवस्थाबारे महिलाहरु खुलेर बोल्न सक्दैनन्। यो विषयलाई अझै पनि संकोच मानेर बोल्ने विषयको रुपमा लिइन्छ। हाम्रो समाजमा सबैभन्दा भेदभाव मासिक धर्म भएको बेला देखिन्छ। यसलाई खराब मानिन्छ।’
काठमाडौँको बिजुलीबजारको पुलमा टाटा मोबाइल दु*र्घटना